Xukun Ku Dhacay Haweeneydii Hubka iyo Miinooyinka u gudbin jirtay Al-shabaab..
Mogadishu- Somali: Maxkamadda Ciidamadda Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah waxay xukuno kala duwan ku riday shaqsiyaad ka tirsanaa sirdoonka xoogaga xiriirka la leh Al-Qaacida.
Dhammaan eedeysanayaasha ayaa soo galay gacanta ciidamada amniga 14/03/2019. 08/07/2019 ayaa loo diray xabsiga dhexe kadib markey codsaden xafiiska xeer ilaalinta in xabsiga dhexe lagu haaayo garsuge ahaan.
Waa kuma shaqsiyaadka la kulmay?
Cabdiraxmaan Nuur Maxamed ayaa ahaa madaxa wardoonka kooxdan, waxa uu ku biiray Shabaab 2018, dhowr goobo ayuu sahan u ahaa oo siyaaba kala duwan bambooyin loogu tuuray.
Waxa uu Maxkamadda ka hor sheegay in kal hore Bariire u aaday tababar iyo is diiwaan gelinta kooxda, eedeysanaha labaad ayuu sheegay in uu ku tashkiiliyay kooxda.
Xukunka Maxkamadda waxaa ka furan rafcaan ku siman 30-cisho ah, sidda ay sheegeen garsooreyaasha, kuwaas oo tilmaamay in xukunkaan lagu saleeyay Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed.